Isha laga soo xigtay: Dib-u-Eegista Caalamiga ah ee Qiimaha-jaban, nidaamyada meelaynta GPS-ku-saleysan ayaa hadda laga heli karaa mashaariicda qallalan. Nidaamka caadiga ah waxaa ku jira kumbuyuutar PC-ga caadiga ah oo la jaan qaada, oo leh taxane kala jaad ah GPS Trimble 4000 iyo barnaamijyada Windows-kaxeeya sida HYPACK. Farsamo yaqaan aqoon u leh ayaa ku rakibi kara nidaam aasaasi ah mid yar ama mid dhexdhexaad ah mid ama laba maalmood gudahood. Mar haddii la dejiyo nidaamka, qofka aqoonta aasaasiga u leh qalabka agabka elektiroonigga ah (sida Loran) ayaa loo tababaran karaa inuu ku shaqeeyo nidaamka wax ka yar laba maalmood. Sida dhammaan qalabka elektiroonigga ah, nidaamyada GPS maahan dhibaatooyin aan badnayn, laakiin ...
Ilaha 1996: VIRGINIA POWER CO. - Shirkadda Dhismaha ee Chesterfield Station Virginia Southwind Construction (SWC) waxaa qandaraas lagu siiyay inay ka shaqeyso qodista shirkadda korantada ee Virginia saddex (3) goobood oo kala duwan oo wadarta guud ee dambasku ay ka bilaabmayso 400,000 oo dhudhun yards ilaa hal milyan oo dhudhun yards oo ku taal Chesterfield. Saldhigga. 14-inch Ellicott® Brand B-890 "Wheel-Dragon" red qodis ayaa loo isticmaalay in si hufan (iyo qiimo-wax ku ool ah) looga saaro dambaska hal saxan oo walxaha lagu sii mariyo dhuumaha wax lagu duubo ee weelka lagu keydiyo. Daahyada jilicsan ayaa loo adeegsaday si loo xakameeyo adkaha adag ee la joojiyay loona yareeyo jahwareerka barta dheecaanku ka soo baxayo ee loo maro James River. Intaa waxaa sii dheer, xaaladaha sinnaanta ee weelka kaydinta ayaa xumaaday ...